Ihowuliseyili iCVV-19 IgGIgM yokuchonga abavavanyi abakhawulezayo bovavanyo kunye nomthengisi | Immuno
Uvavanyo lwe-COVID-19 IgGIgM yoVavanyo oluKhawulezayo
Isetyenziselwe Uvavanyo lwe-COVID-19 IgG / IgM yovavanyo olukhawulezayo
Umzekelo Igazi elipheleleyo / i-serum / iplasma
Isiqinisekiso I-CE / ISO13485 / Uluhlu oluMhlophe
MOQ Iikiti ezili-10,000 zovavanyo
Ukupakisha Iikiti ezingama-40 zovavanyo / ibhokisi yokupakisha
Ubushushu bokugcina 2-30 ° C
Imveliso yokuXhobisa 1 Million / Usuku
I-COVID-19 IgG / IgM Inkcazo yovavanyo olukhawulezayo
Uvavanyo lwe-IMMUNOBIO COVID-19 IgG / IgM yovavanyo olukhawulezayo kukufumanisa i-IgG kunye ne-IgM antibodies kwintsholongwane ye-COVID-19. I-anti-human IgG kunye ne-anti-ligand ziboshwe ngokwahlukeneyo kumda wovavanyo 1 kunye nommandla we-2. Umxube emva koko unyukela phezulu kwi-chromatographical ye-capillary nge-capillary action kwaye uphendule nge-anti-human IgG kunye ne-ligand anti-human IgM. I-COVID-19 IgG okanye ii-antibodies ze-IgM, ukuba zikhona kwisampim, ziyadibana ne-IgG echasene nabantu kwingingqi 1 okanye i-ligM yokuchasana nabantu i-IgM. Ubunzima bufakwa kwaye benza umgca wombala kumda wovavanyo 1 okanye 2.
ICoronavirus COVID-19 IgG / IgM yovavanyo olukhawulezileyo lwe-Antibody Test iqulethe amasuntswana e-antigen-coated COVID-19. I-anti-human IgG kunye ne-anti-human IgM ziboshwe kwimimandla yomgca wovavanyo.
Vumela isixhobo sovavanyo, isampulu, i-buffer, kunye / okanye ulawulo lokulinganisa kubushushu begumbi (15-30°C) ngaphambi kovavanyo.
1. Yizisa isingxobo kwiqondo lobushushu kwigumbi ngaphambi kokuvula. Susa isixhobo sovavanyo kwisingxobo esitywiniweyo kwaye usisebenzise ngokukhawuleza.
2. Beka isixhobo sovavanyo kwindawo ecocekileyo nethe tyaba.
KwiSerum okanye iiPlasma specimens:
Bamba i-dropper ngokuthe nkqo, zoba isampulu ukuya kwi-Fill Line (malunga ne-10 μL), kwaye ugqithisele isampuli kwisampuli kakuhle (S) yesixhobo sovavanyo, emva koko yongeza amathontsi ama-2 e-buffer (malunga nama-90 mL) kwaye uqale isibali-xesha. Jonga umzekeliso ongezantsi. Kuphephe ukurhola amaqamza omoya kwimodeli elungileyo (S).
Igazi elipheleleyo (iVenipuncture / Fingerstick)
Ukusebenzisa i-dropper: Bamba i-dropper ngokuthe nkqo, zoba isampulu ye-0.5-1 cm ngaphezulu kwe-Fill Line, kwaye ugqithisele ithontsi eli-1 legazi elipheleleyo (malunga ne-10 µL) kwi-specimen well (S) yesixhobo sovavanyo, emva koko dibanisa amathontsi ama-2 Isikhuseli (malunga nama-90 uL) kwaye uqalise isibali-xesha. Jonga umzekeliso ongezantsi.
Sebenzisa imicropipette: Umbhobho kunye nokuhambisa i-10 µL yegazi elipheleleyo kwisampuli (S) yesixhobo sovavanyo, emva koko dibanisa amathontsi ama-3 esilinganisi (malunga ne-90 µL) kwaye uqalise isibali-xesha. Jonga umzekeliso ongezantsi.
3. Uluhlu oluMhlophe lwase China
Izinto eziluncedo eziphambili
1. Kuthatha kuphela imizuzu eli-10-15 ukulinda iziphumo zovavanyo
2. Ukuchaneka> 98%
3. Kulula ukusebenza, akukho zixhobo zifunekayo
Inkqubo elula, yokonga ixesha
Hangzhou Immuno Biotech Co., Ltd.yishishini le-biotechnology ikakhulu elibandakanyekayo kwimveliso nakwintengiso. Kwabhaliswa ngo-2014 kwi-Building 2, No. 28, No.3 Street, Hangzhou Economic and Technological Development Zone. Owona msebenzi uphambili wenkampani yimveliso kunye nokuthengiswa kwetekhnoloji ye-antigen ephindaphindayo, uphuhliso, imveliso kunye nentengiso yokuqonda isifo ngokukhawuleza izinto ezenziwayo, kunye nokungenisa elizweni iimveliso zempahla eluhlaza kunye netekhnoloji.
Egqithileyo Uluhlu olumhlophe lwe-CE I-IGG IGM COVID 19Test Antibody test kit
Okulandelayo: Inoveli yeCoronavirus IgGIgM yokuVavanya ngokukhawuleza kweAntibody
I-coronavirus ikiti yovavanyo lokuqonda isifo ngokukhawuleza
uvavanyo lokuvavanya ngokukhawuleza
uvavanyo lokuqonda isifo somkhuhlane
inyathelo elinye lokuvavanya uvavanyo ngokukhawuleza
uvavanyo lokuqonda ngokukhawuleza
iimvavanyo zokuchonga ngokukhawuleza kwi-microbiology
uvavanyo lomkhuhlane ngokukhawuleza
Uluhlu olumhlophe lwe-CE IGG IGM COVID 19Test Antibody tes ...
Inoveli yeCoronavirus IgGIgM yokuVavanya ngokukhawuleza kweAntibody